Myanmar Youth Media Club - Mob
Myanmar Youth Media Club ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာကတည်းက အားပေးလာခဲ့တဲ့ fan တွေရော ၊ ခုမှ MYMC ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ပါဝင်ချင်တဲ့ fan တွေအတွက်ရော MYMC နဲ့ ဒီထက်ပိုပြီးရင်းနှီးနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်လေးတခုကို စဉ်းစားပေးထားပါတယ်။MYMC အတွက် တဖက်တလမ်းက ကူညီချင်တယ် ၊ Idea အသစ်လေးတွေမျှပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါ။ MYMC ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ Interviewတွေ၊ Special Program တွေမှာ ပါဝင်ကူညီနိုင်သလို၊ MYMC ရဲ့ ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ www.mymcnews.net ဆိုတဲ့ သတင်းဆိုဒ်မှာလည်း ကိုယ်စုဆောင်းထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဝေမျှရင်းနဲ့ ကူညီအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စီစဉ်ဦးမယ့် MYMC ရဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်း သင့်ရဲ့အစွမ်းအစတစိတ်တပိုင်း ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့...
အောက်မှာပါတဲ့ formဖြည့်ပြီး လူငယ်တွေအတွက် လူငယ်တွေမှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့MYMCမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို အရယူလိုက်ပါ။
Form မှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ပေးဖို့တော့ မှာချင်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ Form များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ မဟုတ်သလို လူဦးရေအကန့်အသတ်လည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကို gtalk က add ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Email ပို့ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ကဲ MYMC မှာပါဝင်လာမယ့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူငယ်တွေကို ဒီကပဲ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
သတိပြုရန်။ ။ Application Form ကို English လိုပဲ type လုပ်ပြီး တင်ပေးပါရန်။ Burglish, မြန်မာ font ဖြင့် ရေးသားထားသော form များကို လုံးဝ လက်ခံ စဉ်းစားပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Nickname (Burmese nicks are NOT accepted) *
Type in your current country *
Do you have any experience with Online Communities? *
Yes No How many hours do you usually spend on internet everyday? *
0-2 hrs2-4 hrs4-6 hrs6-8 hrs8-10 hrs10 hrs+
Do you check and respond emails regularly? *
YesNoI don't read emails.
Where did you hear about MYMC? *
Why do you like MYMC? (please be specific with your answer.) *
If you are chosen to become one of MYMC Members, in which way do you think you can help us? *
Please type the bold text you see in the box. *
Other Applications	MYMC DJ လျှောက်ရန်ရန်ကုန် MOB လျှောက်ရန်Got Talent? လျှောက်ရန်	Enter your email address:
Content View Hits : 8586729